Izindaba - High Pressure kokuzihlanganisa Steel Valve
Ngokukhetha i-valve enomzimba okhohliwe umsebenzisi wandisa ngokuzenzakalela ukuphepha nobuqotho besitshalo nemishini yokusebenza kwabo. Sekuyisikhathi eside kwaziwa ukuthi i-valve eyakhiwe iqinile, imelana kakhulu nomthelela, imelana nengcindezi yamapayipi abangelwa kakhulu futhi iphakeme ngokwengeziwe kunabalingisi abalinganayo.
Iningi lalo lonke amabhonethi amancane okufaka ingcindezi encane anezinsimbi ezinkulu ezifakwe ocingweni lokufaka i-bonnet ne-pressure seal gasket. Kuyaziwa kakhulu embonini ukuthi imicu yobubanzi obukhulu inenkinga enkulu ngesikhathi sokulondolozwa ikakhulukazi kuzicelo zokushisa okuphezulu lapho ngokuhamba kwesikhathi ama-oxide akhula khona emicwini ebenza bacishe bangakwazi ukuhlukanisa. Idizayini entsha ye-SB yomgunyathi wokuqinisa ingcindezi "yivalve encane enezinzuzo ezinkulu zokubhora". Le ndlela entsha ifaka izinto ezijwayele ukubekelwa izingqinamba ezinkulu zesibhobo kule phakethe elihle kodwa elifinyelelekayo. Ifinyeleleka futhi ilungiswa kakhulu. ubujamo obukhulu be-valve enkulu yebhonethi yokudweba imishudo kulo mklamo omncane-wokuqamba. Ukuqamba okusha kwenzeke ngokuguqula indlela evamile yokudonsa imishudo ibe idizayini ye-jacking bolt
IZIKHOMBISI ZOMZIMBA ZOMDLALO NGAPHAKATHI
I-SB Series Body inemihlahlandlela eyakhiwe ngomshini ngaphakathi ye-Obturator enembe kakhulu futhi engenankinga kakhulu kunemihlahlandlela evamile eshiselwe.
Imihlahlandlela eshiselwe ingagqashuka ngenxa yengcindezi nokudlidlizela noma ngisho nokugqwala futhi kungaholela ezingxenyeni ezigcina ngenqubo. Ukuhluleka komhlahlandlela nakho kungaholela ekuqhutshaneni kwe-valve.
Imihlahlandlela eyenziwe ngomshini iholele ekudlidlizeni okuncane kwesitholi. Umhlahlandlela wekhwalithi empofu udala umonakalo ezindaweni zokuhlala.I-SB Series emisha isemishinini enembile, okuholela ekutheni i-obturator ibanjwe iqinile futhi ibe sesimweni esifunekayo.
I-Body to Yoke surface mating ifakwe i-Centering Beer esebenza njengesiqondiso seJacking Ring.
Ihlombe lithwebula iJacking Ring ngaleyo ndlela livimbele ukungahambi kahle ngesikhathi somhlangano futhi ligcina iRing isesimweni ngenkathi amabhawodi e-jacking esebenzisa amandla okuqala kubhonethi nakucindezelo lwensimbi
Engagqwali Ball Amaphayiphu, Ingxubevange Steel Ball Amaphayiphu, Bronze Ibhola Valve, Inhlanzeko Engagqwali Ball Amaphayiphu, Engagqwali Ball Valve, Bronze Ball Valve Nge Ptfe Izihlalo,